Puntland oo go’aano ka soo saartay dugsiyada Qur’aanka &…
Dowlad-goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa go’aano kasoo saartay tukashadda Salaadda Ciida iyo dib-u-furidda dugsiyadda Qur’aanka oo loo xiray cabsi laga qabo xanuunka Covid-19 awadiis.
Wasiirka Cadaaladda Puntland oo warbaahinta la hadlay, ayaa shaaciyey in Maamulkiisu go’aanstay in dugsiyada dib loo furo kadib Ciidul Fidriga markii “daruuriyaad ay soo foodsaareen Macalimiinta”.
Sidda laga soo xigtay Wasiirka Cadaalada Cawil Sheekh Xaamud, waxaa jira shuruudo loogu ogolaanayo macalimiinta in ay dib u shaqo bilaabaan ayna kamid tahay in wax ka badan 30 arday aysan wada geli karin hal qol.
“Tusaale ahaan macalinkii haystay 60 arday waa in uu laba waqti ka kala dhigaa ama qol kale uu kireystaa,” ayuu ku daray hadalkiisa.
Talaabadan, sidda uu ka dhawaajiyey wasiirka, ayaa loo qaadayaa si loo dhaqan-geliyo habraaca kala fogaanshiyaha dadweynaha, macalimiinta ayuu ku booriyey in ay fuliyaan kana war-qabaan is-dhexgalka ardayda.
“Waxaa sidoo kale, macalimiinta looga baahan yahay in ay haystaan waxyaabihii cudurkani looga gaashaamanayey sidda af-xirkii iyo gacma gashiga” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Wasiirka caafimaadka Puntland, Jaamac Faarax Xasan , ayaa xoojiyey in kala fogaanshiyaha dadweynaha ay kamid yahay hababka ugu waaweyn ee looga hortagi karo cudurka, isagoo ku baaqay in la fuliyo.